Global Voices teny Malagasy » Rosia : Bilaogera Mahita Mpitifitra An-dàlambe · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Aogositra 2011 15:36 GMT 1	 · Mpanoratra Ashley Cleek Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Saripika, Teknolojia, Akon'ny RuNet
Nalaky be tokoa ny valinteny avy amin'ireo bilaogera tao amin'ny aterineto Rosiana taoroan'ny fampakàrana lahatsoratra sy vaovao momba an'i Dmitry Ternovsky  , mpaka sary fanta-daza sy bilaogera[ru] izay nisy nitifitra tsy ela akory izay teny an-dàlambe tao atsimo-atsinanan'i Mosko.
Nibitsika mivantana  zava-niseho iray manjavozavo nisianà lehilahy roa tsy fantatra nitifitra ny fiarany i Ternovsky[ru] :
Ny videon’  ny fitifirana dia nalefa ny 14 Jolay 2011, nakarin'ilayy mpampiasa YouTube ridusnews (Ternovsky no ao ambadik'ilay “Ridus News ” vondrom-piarahamonina fanaovan-gazetin'olon-tsotra) :
Nampakatra sary  momba ilay vodim-bàla koa i Ternovsky, izay hitany teo amoron-dàlana.
Taty aoriana, nitantara feno ny zava-nisy tamin'ny tafatafa iray niaraka tamin'i RIA Novosti  i Ternovsky[ru] :
Taorian'ny fikarohana ny laharan'ny fiara, dia hitan'ny polisy fa nisoratra taminà vehivavy mpisolovava iray ao Mosko ilay fiara. Nahavita naka sary  ireo lehilahy roa tao anatin'ilay fiara koa i Ternovsky. Nandeha avy hatrany nitaritarika ny tambajotran-tranonkalam-baovao ireo bilaogera, izay sary hita farany tena izy mitovy amin'ireo lehilahy ao amin'ny tranonkala Rosiana Odnoklassniki. Vokatr'izany, iray amin'ireo ahiahiana, i Grigory Chubrevich, 24 taona avy any Riga, no voatazona tao Mosko ny 15 Jolay, andro iray taorian'ny zava-niseho.
Ny 15 Jolay, Ternovsky dia nampakatra tao amin'ny bilaoginy  [ru] fanontaniana maro mahakasika ilay zava-nitranga. Anisan'ny zavatra hafa, nanotany i Ternovsky hoe :…..On July 15, Ternovsky posted on his blog  [ru] several questions he has concerning the incident. Among other things, Ternovsky wondered:…..Le 15 Juillet, Ternovsky posté sur son blog [ru] plusieurs questions, il a sujet de l'incident. Entre autres choses, Ternovsky me demandais:
Anatin'ny fanehoan-kevitra eo ambanin'ity lahatsorany ity dia, niray hevitra avy hatrany tamin'i Ternovksy ireo bilaogera  [ru], nanamarika fa :
Nanahy ny bilaogera iray  [ru] fa ny lalàna mazava momba ny fanafihana madinidinika ampivadiana amin'ny tsy fahampian'ny fiarovan'ny polisy dia handrisika ireo nahavanon-doza “hamaly faty” an'i Ternovsky avy eo :
Ny 15 Jona, andro iray taorian'ilay fanafihana, Ilya Varlamov  [ru], Rosiana mpitoraka bolaogy an-tsary malaza sady naman'i Ternovsky, niantso ny bilaogera handeha hanohana ny iray amin'izy ireo. Nampakatra lahatsoratra iray tao amin'ny bilaoginy [ru], niantso ny rehetra hanohana an'i Ternovsky ny 16 Jolay.
Nandefa lahatsoratra amin'ny antsipirihany momba ny famotopotorana izy [ru] taoriana kely ary nisaotra ireo olona 40 na mihoatra izay tonga hanohana an'i Ternovsky.
Noho ny faneren'ireo bilaogera, dia nahazo ny fifantohan-tsain'ireo manampahefana syny fampahalalàm-baovao ilay zava-niseho. Ny fotoam-pitsarana voalohany dia nanapa-kevitra ny hisambotra an'i Chubrevich 2 volana mandritra ny fanadihadihana. Araka ny Echo Moskvy , Chubrevich dia mety ho voampanga noho ny “Hooliganism / Fikambanana Jiolahim-boto”, izay hitarika fanasaziana hatramin'ny fampidirana 7 taona am-ponja.
Dmitry Ternovsky dia efa mpisolovava ny zon'ireo mpitoraka bilaogy an-tsary ao Rosia, indrindra ny zon'izy ireo haka ny sary ireo toerana – avy amin'ny tranoben'ny governemanta  hatramin'ireo tranobe fiasana vaovao vao naorina ka hatramin'ireo tranombarotra . Ternovsky, miaraka amin'ny biloagera namana maro, dia matetika mandeha mitsangatsangana sy manao dia fakàna sary (photowalks) hezaka haka sary ireto toerana toy ny tranom-panjakana sy birao, ary olona toy ny polisy sy mpitàna birao, hiezaka hanosika ny fetra farany amin'izay azo sy tsy azo alaina sary ao Rosia.
Tsy ela akory, mpitoraka bilaogy an-tsary maro, anisany i Ternovsky, no nandefa taratasy  ho an'ny Filoha Rosiana Dmitry Medvedev, manambara fa ny fomba fanakanan'ny polisy ny mpaka sary tsy hahazo maka sary dia fanitsakitsahana amin'ny lalàmpanorenana Rosiana.
Ankehitriny, ny vondron'ireo mpaka sary dia miasa handresy lahatra ny mpandraharaha, trano fisotroana kafe, ary ny mpiasam-panjakana mba hanatevin-daharana ny tetikasa ‘Fahalalahan'ny Fakàn-tsary ‘ [ru], amin'ny fandefasana taratasy kelinà fakan-tsary maitso araikitra eny amin'ny varavaran-kelin'ny mpandraharaha sy trano fiasàna. Hatreto, ny polisin'ny Mosko renivohitra dia nanatevin-daharana azy ireo  [ru], mamela ny hakàna sary azy ireo eny amperin'asa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/13/20282/
 Nibitsika mivantana: http://twitter.com/#!/dternovskiy
 nampakatra tao amin'ny bilaoginy: http://ternovskiy.livejournal.com/138064.html
 niray hevitra avy hatrany tamin'i Ternovksy ireo bilaogera: http://ternovskiy.livejournal.com/138064.html?thread=4846416#t4846416
 Nanahy ny bilaogera iray: http://rovego.livejournal.com/2126989.html
 Nampakatra lahatsoratra iray : http://zyalt.livejournal.com/425859.htmlhttp://zyalt.livejournal.com/425859.html
 amin'ny antsipirihany momba ny famotopotorana izy: http://zyalt.livejournal.com/426022.html
 tranoben'ny governemanta: http://zyalt.livejournal.com/419623.html#cutid1
 tranobe fiasana vaovao vao naorina : http://zyalt.livejournal.com/396481.html#cutid1
 no nandefa taratasy: http://www.rg.ru/2011/07/04/fotoblogery-site-anons.html
 Fahalalahan'ny Fakàn-tsary: http://zyalt.livejournal.com/421481.html
 nanatevin-daharana azy ireo: http://zyalt.livejournal.com/344941.html